Inta lagu jiro waqtiga adag ee muddada COVID-19, maxaan sameyn karnaa si aan u badbaadino nafteena & kuwa aan jecel nahay? Marka laga reebo xirashada maaskaro wejiga marka aad baxeyso oo gacmaha si joogto ah u dhaq, jimicsi badan samee oo kor u qaad habka difaaca jirka ayaa noqon doona doorasho kale oo wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, dadku waxay leeyihiin meel xaddidan iyo qalab jimicsi ...
La -dagaallanka Furayaasha furayaasha jilicsan ee PVC
Furaha furaha jilicsan ee PVC waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee la bixiyo si kor loogu qaado ganacsigaaga, ururkaaga ama dhacdadaada. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto sida ugu dhakhsaha badan ee furaha yar ee jilicsan ee PVC u faafin karo baayacmushtarka, marka dadku ku ridaan boorsada, boorsada, furayaasha, baabuurta, bacaha, taleefanka gacanta, dhammaantood waxay sameeyaan ...
Noocyada kala duwan ee qalabka maaskaro, badbaado iyo raaxo badan in la xidho
Waji-xidhka wejiga ayaa si dhakhso ah u noqday daruuri maalinle ah 2020, COVID-19 aad buu uga mahadcelinayaa helitaankooda cusub. Haddii maaskaro ay tahay Regina Georges ee xirashada maalin kasta, markaa qalabka maaskaro ayaa dhowaan noqon doona Gretchen Wienerses iyo Karen Smiths oo ka tirsan Kahortagga Coronavirus ...
Maaskaro Wajiga Ah Oo Qiimo Jaban
Maaskaro wejiga ayaa hadda qayb ka ah nolosheenna maalinlaha ah, ma rabtaa inaad ilaaliso naftaada & kuwa aad jeceshahay oo aad abuurto maaskaro wejiga si aad u sameyso bayaan mood, ma u kala duwan tahay qaabkaaga maalinba maalinta ka dambeysa? Waan ku faraxsanahay inaan dhaho waxaad u imaanaysaa alaab -qeybiyihii saxda ahaa ee awooda inuu naqshadeeyo maaskaro wajigaaga ...
Sanduuqa Disinfection-ka ee Wireless-ka ah ee Faa'iidooyinka badan leh & Lamp-ka Nadiifinta UV
by maamulka 20-10-22
Weligaa ma ku dhibtay sida loo ilaaliyo nadaafadda iyo caafimaadka, gaar ahaan COVID -19? Alaabtayada cusub ayaa kaa caawin karta xallinta xujooyinkaaga. Waxaa jira noocyo kala duwan oo shay ah si loola dagaallamo coronavirus. Waxaan bixin doonaa sanduuqa lacag-bixinta wireless-ka / sanduuqa jeermis-dilaha & jeermis-dilaha UV ...
Laan -gacmeedyada Maaskarada Wajiga iyo Silsiladaha ayaa ah Qalabka aad u baahan tahay
Xirashada maaskaro wajiga ilaaliya ayaa hadda ku jira liiska waxyaabaha daruuriga u ah nolol maalmeedkeenna bilo ama xitaa sannadaha soo socda, in la yiraahdo, dhaqidda iyo ka -ilaalinta maaskaro qof walba waxay noqon kartaa shaqo, qofna ma doonayo inuu lumiyo waji -xidhka jidka ku tuuray. Waan ku faraxsanahay inaan ku ...
Xaashida Acrylic ee Kala Fogeynta Bulshada
Miyaad haysataa ilaalin kugu filan si aad u badbaadiso ardaydaada, shaqaalahaaga iyo macaamiishaada? COVID-19 wuxuu beddelay sida adduunkeennu u eg yahay. Khabiir ku takhasusay cudurrada faafa ayaa dadka kula taliya inaysan wada hadlin haddii ay tahay inay wax wada cunaan. Ganacsatadu waxay rajaynayaan samaynta qoruhu inay yarayn doonaan ...
Faafida socota waxay ka dhigtay nadiifiyaasha, nadiifiyeyaasha iyo nadiifiyeyaasha lama huraan maadaama macaamiishu ay isku dayaan inay sida ugu wanaagsan u maraan heerka cusub oo ay nabad ahaadaan, sidaa darteed qofka nadaafadda haya ayaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto sidii hore loogu sii hayn lahaa gacanta. Nadiifinta gacmaha ayaa ka muhiimsan sidii hore, nasiib daro, ...
Furaha Birta Furaha badan ee Keychain
Waan ku faraxsanahay inaan soo bandhigno badeecadeena ugu iibinta wanaagsan: Furaha furaha biraha ee ujeedooyin badan leh oo la qaadi karo maalin kasta oo ilaalin kara caafimaadkeena. Kani maahan kaliya furitaanka albaabka taabashada, si sahal ah si aad u riixdo badhamada wiishka, jiido gacmaha khaanadda iyo albaabada, albaabada furan oo aan lahayn conta jireed ...
Gacan -nadiifiye Silicone Silsilad
Nadiifiyaha gacantu waa aalad nadaafadeed oo lagama maarmaan ah halka masiibadu wali tahay mid xooggan oo baahsan. Waa inaan dib uga fiirsano wax kasta oo aan naqaanno oo ku saabsan sida loo ilaaliyo badbaadadeena iyo caafimaadkeena, sida gacmo -dhaqashada joogtada ah, nadaafadda habboon iyo fayadhowrka gacanta, taas oo si gaar ah run ugu ah dadka ...
Waxaan bixinnaa Alaabooyinka Ka -hortagga Caabuqa
Hadiyadaha SJJ ma aha oo kaliya inay bixiyaan maaskaro wajiga & ilaaliyaha maaskaro, bandana, gacmo nadiifiye, warqad saabuun, laakiin waxay kaloo bixisaa noocyo kale oo kala duwan oo ah waxyaabaha ka hortagga caabuqa. Waxba ha ahaadee waxaad raadineysaa silsilado loop iska caabin silikoon ah, kubbadaha yoga, sariirta yoga, suunka garka ee ka hortagga khuurada si ay kaaga caawiso inaad hesho ...
FASAXYADA SHAQOOYINKA QIIMAHA WAKHTIGA WAQTIGA
Sababtoo ah maaskaro wajiga qalliinka ayaa gabaabsi ah, maaskaro kasta ayaa ka fiican maaskaro la'aan si ay gacan uga geysato yareynta faafitaanka coronavirus, iyo xulashada maaskaro wajiga marada ayaa noqon doonta xal weyn. Hadiyadaha qurxoon ee dhalaalaya waxay bixiyaan maaskaro weji dhar ah oo casri ah qiimaha tooska ah ee warshadda iyo waqtiga dhalmada degdegga ah, oo leh noocyo kala duwan ...